निजी विद्यालय गुठीमा जान सम्भव छैन- हरिकृष्ण श्रेष्ठ |
निजी विद्यालय गुठीमा जान सम्भव छैन- हरिकृष्ण श्रेष्ठ
प्रकाशित मिति :2019-03-12 08:13:17
नुतन संस्कारयुक्त शिक्षा भनेको के हो ?
नुतन भनेको नयाँ खोज हो । बालबालिका के चाहन्छन् उनीहरुको मनोविज्ञान बुझेर, जस्तो चाहन्छन् सोही ढंगबाट अध्यापन गराउने पद्धति नै नुतन संस्कारयुक्त पद्धति हो । यो पद्धतिमा शिक्षकले विद्यार्थीको व्यवहार, इच्छा, चाहनलाई स्वीकार गरी सोही अनुरुप पठनपाठन गराइन्छ । विद्यार्थीहरु जुन तरिकाबाट सिक्न र बुझ्न चाहन्छन्, त्यसैगरी सिकाईन्छ ।
परम्परागत शिक्षा प्रणालीभन्दा यो कसरी फरक छ ?
परम्परागत शिक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीहरुले शिक्षकलाई फलो गर्नुपर्छ । यसमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई फलो गर्नुपर्छ । यस प्रणालीमा विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउँदा विद्यार्थीहरु अन्तरक्रिया गर्छन् । खुलेर आफ्ना मनमा लागेका कुराहरु राख्न सक्छन् । यसरी पढाउँदा विद्यार्थीमा आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ भने यो पद्धतिले विद्यार्थीहरुमा भएको प्रतिभालाई बाहिर ल्याउन पनि प्रभावकारी भूमिका खेल्छ ।
यो पद्धतिमा पढाउँदा विद्यार्थीलाई के फाइदा हुन्छ ?
यो पद्धतिमा पढाउँदा शिक्षक र विद्यार्थीबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापित हुन्छ भने विद्यार्थीहरुले पढाएका कुरा सजिलै बुझ्न सक्छन् । कक्षा अन्तरक्रियात्मक हुन्छ । यो पद्धतिले विद्यार्थीहरुमा भएको प्रतिभालाई बाहिर ल्याउन पनि सहयोगी भूमिका खेलेको छ ।
बन्दै गरेको शिक्षा नीति कस्तो हुनुपर्छ ?
सरकार अहिले संघीय शिक्षा नीति बनाउँदै छ । शिक्षा नीतिले नेपालको संग्रह शिक्षा क्षेत्रलाई समेट्न सक्नुपर्छ । एकतर्फी शिक्षा नीति बन्नु हुँदैन । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरुको पनि योगदान छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नेदेखि लिएर शिक्षकशिक्षिकालाई रोजगारी प्रदान गर्ने काम गरेको छ । सरकारले त्यसको मूल्यांकन गरी निजी विद्यालयलाई होतोत्साही नगर्ने गरी शिक्षा नीति बन्नुपर्छ । ऐनमा सबै शिक्षाविद्, अभिभावकले भनेका कुराहरुलाई समेट्नुपर्छ ।
निजी विद्यालय सार्वजनिक गुठीमा जाँदा के फरक पर्छ ?
प्रतिवेदन आधिकारी रुपमा सार्वजनिक भएको छैन । मिडिया, समितिका सदस्यहरुबाट प्रतिवेदनमा भएका कुरा सुनेका हौं । प्रतिवेदनमा आगामी १० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजाने र कम्पनी ऐनमा सञ्चालन हुन नपाउने कुरा छ । यदि यो साँचो हो भने सम्भाव छैन । यसले नेपाली विद्यार्थी विद्यालय तहको अध्ययनका लागि बाहिर जाने खतरा हुन्छ भने नेपाली अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्नका लागि विदेश पठाउन बाध्य हुन्छन् । यसले नेपालको पुँजी विदेशीन्छ ।
अन्त्यमा प्याब्सनले निजी शिक्षा क्षेत्रका लागि कस्ता कामहरु गर्दै आइरहेको छ ?
प्याब्सनले निजी विद्यालयको रक्षा, सम्पत्ति संरक्षण गर्ने मात्र नभई निजी विद्यालयलाई व्यवस्थित ढंगले कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा नीति नियम बनाउने काम गर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकशिक्षिकाहरुलाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिम दिने, सीप सिकाउने काम पनि प्याब्सनले गरिरहेकै छ । यसका साथै प्याब्सनले विद्यार्थीहरुमा भएको प्रतिभा, क्षमता प्रस्फुटन गर्नका लागि विभिन्न खालका अतिरिक्त क्रियाकलाप र विभिन्न प्रतियोगिता सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । अभिभावक र विद्यालय विद्यालयबीच भाइचारको सम्बन्ध स्थापित गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्छ भने उत्कृष्ट हुने विद्यार्थीहरुलाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्नका लागि सम्मान गर्ने, पुरस्कार दिने काम पनि प्याब्सनले गरिरहेकै छ ।